Knowledge – Page5– Healthy Life Journal
သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ မျက်လုံးပုံက ပြောပြနေသည့် သင့်အကြောင်း
ကိုထက် အခုဖော်ပြထားတဲ့ မတူတဲ့ မျက်လုံးပုံစံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး သင့်စိတ်ထဲမှာ သဘောအကျဆုံးလို့ ခံစားမိတဲ့ ပုံတစ်ပုံကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် သင်ရွေးလိုက်တဲ့ ပုံလေးက ဘယ်လိုစိတ်နေသဘောထား ရှိတတ်သူတွေလဲဆိုတာကို ဖတ်ကြည့်လို့ရပါပြီ။ နံပါတ် (၁) မျက်လုံးပုံကို သဘောအကျဆုံးဆိုရင် ပထမဆုံး မျက်လုံးပုံလေးကို...
သင်အကြိုက်ဆုံး ကိန်းဂဏန်းက ပြောပြနေသည့် သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
ကိုထက် ဝ ကနေ ၉ အထိ သင်အကြိုက်ဆုံး ဂဏန်းကို ရွေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းက သင့်ကိ်ုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ဖော်ပြနေတာဖြစ်လို့ သင့်အကြောင်းကို ဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်။ (၁) တစ်ဂဏန်းကို အကြိုက်ဆုံးသူတွေဟာ ချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်းသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေက တစ်ဂဏန်းကို...
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လယ်သမားတစ်ဦးက မုန့်ဖုတ်သမားဆီကို နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ထောပတ်တစ်ပေါင် ရောင်းလေ့ရှိပါသတဲ့။ တစ်နေ့ကျတော့ မုန့်ဖုတ်သမားက သူဝယ်တဲ့ထောပတ်တစ်ပေါင်ဟာ အလေးချိန်မပြည့်ဘူးဆိုပြီး စိတ်တိုဒေါသထွက်ကာ ရွာလူကြီးဆီ သွားတိုင်ပါတော့တယ်။ ရွာလူကြီးက လယ်သမားကိုဆင့်ခေါ်ပြီး ထောပတ်ကိုဘယ်လိုချိန်တွယ်ပြီး ရောင်းလိုက်သလဲလို့ မေးမြန်းပါတယ်။ လယ်သမား ပြန်ဖြေတာက- “ရွာလူကြီးမင်းခင်ဗျား...
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တစ်ခါတုန်းက မွှေးမွှေးဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် ရှိသတဲ့။ တစ်နေ့မှာတော့ မွှေးမွှေးက တောထဲကို လမ်းလျှောက်သွားတဲ့အခါ လှပတဲ့ အိမ်လေးတစ်အိမ်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ပါသတဲ့။ အိမ်လေးရဲ့ လှပမှုက မွှေးမွှေးကို ဆွဲဆောင်လွန်းမက ဆွဲဆောင်နေတာကြောင့် မွှေးမွှေးက အိမ်လေးထဲကို ဝင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ အိမ်ထဲကို...
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ ပြောင်းလဲပါ . . .
စူး(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ရှေးရှေးတုန်းက တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေ ရှိကြတယ်။ သူတို့မှာ စည်းစိမ်ချမ်းသာ အပြည့်အစုံရှိပြီး မကောင်းတဲ့ကံ မကျရောက်တာကြောင့် တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးဟာ အလွန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဘဝမျိုးမှာ အေးချမ်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်။ တစ်နေ့သောအခါ ဘုရင်ကြီးက သမိုင်းဝင်အရေးပါတဲ့ နေရာတွေကို သွားလည်ဖို့...
ဆံပင်ဆိုးဆေးနှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) Q. တချို့လူတွေက ဘာကြောင့် ဆံပင်ဆိုးဆေးနဲ့ ဓာတ်မတည့်ကြရတာပါလဲ ဆရာမ။ A. ဆံပင်ဆိုးဆေးနဲ့ မတည့်တာက ဆံပင်ဆိုးဆေးမှာ ဓာတုပစ္စည်းတွေပါဝင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကက PPD ဆိုတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းကြောင့်ပါ။ PPD...
ခေါင်းမာလှတဲ့ဆိတ်တွေ . .
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဆိတ်နှစ်ကောင်က ကျဉ်းမြောင်းလှတဲ့ တံတားတစ်စင်းပေါ်မှာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆုံမိကြတယ်။ “ငါအရင်သွားမယ်”လို့ တစ်ကောင်က ဆိုတယ်။ “မရဘူး၊ မင်း ငါ့ရှေ့က ဖယ်ပေး၊ ငါအရင် သွားမယ်”လို့ နောက်တစ်ကောင်က ဆိုပြန်ရော။ သူတို့တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင် ရန်ဖြစ်စကားများပြီး နောက်ဆုံးမှာ တွန်းကြ၊...
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တစ်ခါက ထက်မြက်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့ကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မေးတယ်။ “တကယ်လို့ မင်းလမ်းလျှောက်နေရင်းနဲ့. . ရှေ့တစ်လှမ်းလှမ်းရင် သေမယ်.. နောက်တစ်လှမ်းဆုတ်ရင် မျက်လုံးကန်းမယ်၊ မင်းက ရပ်နေလို့လည်း မရဘူး . . လျှောက်တော့ လျှောက်ရမယ်ဆိုပါစို့၊...
ပေးသလောက်သာ ပြန်ရရိုး ထုံးစံရှိပါတယ်
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လယ်သမားတစ်ဦးက မုန့်ဖုတ်သမားဆီကို နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ထောပတ်တစ်ပေါင် ရောင်းလေ့ရှိပါသတဲ့။ တစ်နေ့ကျတော့ မုန့်ဖုတ်သမားက သူဝယ်တဲ့ ထောပတ်တစ်ပေါင်ဟာ အလေးချိန်မပြည့်ဘူးဆိုပြီး စိတ်တိုဒေါသထွက်ကာ ရွာလူကြီးဆီ သွားတိုင်ပါတော့တယ်။ ရွာလူကြီးက လယ်သမားကိုဆင့်ခေါ်ပြီး ထောပတ်ကို ဘယ်လိုချိန်တွယ်ပြီး ရောင်းလိုက်သလဲလို့ မေးမြန်းပါတယ်။ လယ်သမား...
ကြောင်ကို ဘယ်သူ ခြူဆွဲပေးမှာလဲ
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကြွက်ကြီး၊ ကြွက်ငယ်၊ ကြွက်လတ်ရှိသမျှ ကြွက်အပေါင်းတို့က သူတိုရဲ့ ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့ ကြောင်ရန်ကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းရပါ့မလဲလို့ စုဝေးပြီးဆွေးနွေးကြပါတယ်။ ကြွက်တွေက သူတို့မှာရှိသမျှ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကို မျှဝေကြပေမယ့် ကြောင်ကို နှိမ်နင်းဖို့ လုံလောက်တဲ့ စိတ်ကူးသစ်ထွက်မလာကြပါဘူး။ အဲဒီအခါ ကြောင်ရဲ့လည်ပင်းမှာ...